Lasa malaza maneran-tany i Samuel Eto’o, Kameroney kintan’ny baolina kitra, ary handeha hisotro ronono amin’ny faha-38 taonany · Global Voices teny Malagasy
Kalaza fantatra tamin'ny fanomezany tolotra tsara petraka amin'ny fotoana fampidiram-baolina
Voadika ny 01 Oktobra 2019 11:59 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, عربي, English
Eto'o niaraka tamin'i Anzhi Makhachkala nandritra ny lalao Tompondakan'i Rosia nifanandrinany tamin'ny FC Dynamo Moscow, Septambra 2011, avy tao amin'ny Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
“Nanajanona” ny asany namirapiratra izay naharitra 22 taona tao anatina klioba niisa 13 nanerana ny firenena enina ilay Kameroney malaza, Samuel Eto'o – izay nahazoany loka miisa efatra tamn(ny maha Afrikanina mpilalao mahay indrindra ho an'ny taona ary amboara roa avy tamin'ny Ligin'ny Mpandresin'ny Firaisan'ireo Ligin'ny Baolina Kitra Eoropeana.
Nankao amin'ny Twitter haingana ireo mpampiasa aterineto mba hankalazàna ilay maherifon'ny baolina kitra:
The End 🚨
— Njie Enow: Mr Razzmatazz (@NjieEnow) 6 Septambra 2019
ZZZZZZZ Ny Farany 🚨
Vao avy nahazo fanamafisana avy tamin'ireo mpisolo tena an'i Samuel Etoo hoe nanapaka hevitra ny hitsahatra tsy hilalao baolina kitra ilay in-4 nahazo ny lokan'ny Afrikana mpilalao ho an'ny taona ary in-3 mpandresy tamin'ny Ligin'ny tomponadakan'ny UEFA.
Angamba iray amin'ireo Afrikana mpilalao baolina kitra lehibe indrindra @ESheriff237 @oluwashina @UsherKomugisha pic.twitter.com/xJnw8SUym5
Don't Scroll without RT, Like and a Word for Him. 🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲 pic.twitter.com/GsLtuTOZY2
— Nelson Diaz 🇨🇲 🇳🇬🇨🇦 (@NelsonD13255387) 6 Septambra 2019
ZZZZZ Naka ny fisotroan-drononony tamin'ny Baolina Kitra androany i #Samuel_Etoo, ilay Afrikana Mpilalao malaza izay in-2 voatendry ho an'ny Ballon D'OR-n'ny FiFa, in-4 tamin'ny Ballon D'OR-n'ny CAF, in-2 tamin'ny Tompondaka Afrikana an'ireo Firenena ary nahazo ny Isana Baolina Maty Betsaka Indrindra tao Afrika
Aza mandalo fotsiny tsy hamerina bitsika, hanisy “tiako” ary hamela Teny ho azy. 🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲 pic.twitter.com/GsLtuTOZY2
Fa ahoana no nahatongavany tamin'izany?
Mpilalao tanora indrindra tamin'ny Fiadiana izay ho Tompondaka Erantany 1998 tany Frantsa, nahavita fahombiazana tsara be i Eto'o tany amin'ny nisy azy niaraka tamin'ny klioba niofanany, ny Akademia Kaji Sports, talohan'ny nifindrany tao amin'ny Real Madrid ho toy ny mpilalao tanora, tamin'ny faha-15 taonany.
“Tamin'ny naha-tanora azy indrindra… tamin'ny 11 Febroary 1996, [mpianatra] tao amin'ny KSA [Akademia Kaji Sports] i Eto'o talohan'ny nifindrany nankao amin'ny Real Madrid,” hoy ilay Kameroney mpilalao afovoan-kianja, Samson Che, tamin'ny Global Voices tao anatin'ny tafatafa fanadihadiana tamin'ny 7 Septambra, tany Buea, Kamerona.
Nanampy tamin'ny fampiakarana ny ekipa nasionalin'ny baolina kitra Kameroney i Che tenany, ireo Liona Tsy Azo Folahana, tamin'ny Lalao Olaimpikan'ny Fahavaratra 2000 tany Sydney, Aostralia. Izy ihany koa no mpandresy niaraka tamin'ireo Kumbo Strikers tamin'ny fiadiana izay ho Tompondakan'i Kamerona tamin'ny 2000, ary mpandresy niaraka tamin'ny Armée Patriotique Rwandaise Football Club (APRFC) tamin'ny fiadiana ny ho Tompondakan'i Roandà tamin'ny 2006.
“Nanana ny fahafahana hifanandrina taminy aho nandritra ny lalao am-pirahalahiana tao anivon'ny klioba; tamin'izany fotoana izany, nilalao ho an'ny PWD Bamenda aho [kliobam-paritra any Avaratra Andrefana] raha nisolo tena ny KSA kosa izy,” hoy i Che. Nanohy toy izao izy:
“Zara raha… 16 taona monja izy tamin'izany, satria dia teraka tamin'ny 1981 izy… nanome olana maro samihafa ho an'ireo mpiaron'ny afovoan'ny kianjanay izy — tamin'ny fihazakazahany, ny fahaizany ara-teknika sy ny fahamatorany ara-tetika tamin'izany taona izany – Tena nahagaga izany — na dia tsy nilalao afa-tsy 45 minitra ihany aza izy. Teo amin'ny roa taona taty aoriana teo, tafakatra tamin'ny Fiadiana izay ho Tompondaka Maneran-tany izy, ho toy ny mpilalao tanora indrindra.
Nanolotra ny tenany tamin'i Afrika i Eto’o
Nampitolagaga dieny fahatanorany, nilalao anjara asa lehibe tamin'ny fiakaran'i Kamerona tamin'ny Lalao Olaimpikan'ny Fahavaratra 2000 izay nifanandrinany tamin'i Ghana tamin'ny i Eto'o.
“Nantsoina hitoby tao amin'ny ekipa Olaimpika nasionaly izahay — Novambra1999 tamin'izay. Tonga herinandro ho amin'ilay lalao niarahana tamin'i Ghana i Eto'o sy i Pierre Nlend Womé. Resin'i Ghana izahay, 2-1 fa resinay 2-0 tany Yaoundé izy ireo,” hoy i Che nanazava. Nanohy izy:
Nanerana ny kianja iray manontolo i Eto'o — izany no andro nisehoany tamin'ny vahoaka Kameroney teo ambanin'ny maso malina an'i Pierre Lechantre [mpanazatra ireo Liona Tsy Azo Folahana tamin'izany]. … Heveriko fa izay lalao izay no nahazoany tapakila ho any amin'ny fiadiana izay ho Tompondakan'ny Firenena Afrikana 2000 [nokarakarain'i] Ghana sy Nizerià.
Lasa mpampiditra baolina mahay indrindra tao Kamerona niaraka tamin'i Patrick M’Mboma i Eto'o, ilay mpanafika Barseloney taloha, raha toa ka niady mafy mba handresena an'i Nizeria tamin'ny lalao famaranana ireo Liona Tsy Azo Folahana.
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 Septambra 2019
ZZZZZZZ 🔝 @setoo9 🔥
📝Miverina mijery ny asany tao amin'ny Barca izay ahitana ireo antontanisa sy sary lehibe indrindra isika 👇https://t.co/UJUVjh9HeY
Tamin'ny 2002 tany Mali, niaro ny toerana naha-mpandresy tao Afrika azy i Kamerona niaraka tamin'i Samuel Eto'o izay nijanona tamin'ny isa iray ihany, fa hahatafititra baolina in-18 izy, lasa mpampiditra isa betsaka idnrindra tamin'ilay fifaninanana.
Eto'o amin'ny sehatra maneran-tany
Ho tsaroina foana i Samuel Eto'o tamin'ireo fanolorany baolina taminà fotoana lehibe fampidiram-baolina.
Nampiditra baolina nandritra ny Ligin'ny Mpandresin'ny UEFA ho an'ny FC Barcelona tamin'ny 2006 sy 2009 ilay mpilalao 38 taona raha toa ka azon'ireo Kataloniana goavana ny volamena tamin'ireo hetsika ireo.
Toy ny mbola tsy ampy izany, nahazo amboara iray tao amin'ny Ligin'ny Mpandresy niarahany tamin'ny Inter-Milan ihany koa izy – nilalao anjara asa nasiam-panovàna teo ambanin'ny fifehezan'i Jose Mourinho, mpanazatra ny Manchester United :
Handeha hisotro ronono eo amin'ny faha-38 taonany i Samuel Etoo, iray amin'ireo Afrikana Mpilalao Baolina Kitra mahay indrindra.
1 Olympic Gold 🥇 / 1 Volamena Olaimpika🥇
AFCON all-time top scorer ⚽ / Mpanana ny isa ambony indrindra tamin'ny AFCON⚽
4 African Player of the Year 🌍 / in-4 Mpilalao Ho An'ny Taona 🌍
Afrikana tsara indrindra hatrizay? pic.twitter.com/FlXMW9f21s
— YangaWin (@yanga_win) 7 Septambra 2019
1 Volamena Olaimpika🥇
Mpanana ny isa ambony indrindra tamin'ny AFCON⚽ hatrizay
in-4 voafidy ho Afrikàna Mpilalao Ho An'ny Taona 🌍
Nahatonga azy ho Afrikana malaza ny fahaizan'i Eto'o mampitoetra ny marikany ho toy ny mpampiditra baolina mahay indrindra tao amin'ny klioban'i Mallorca sy FC Barcelona taloha tamin'ny alalan'ny 108 baolina tafiditra tao anatina fifanandrinana 144.